Fifanarahana ny fifidianana | NewsMada
Fifanarahana ny fifidianana
Misy fitenenana iray izay manao hoe: sambatra ny manome no ho ny mandray. Amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna izao, mipoipoitra etsy sy eroa ny fanolorana karazana fanampiana na fanomezana. Sambatra sy hafa kokoa ny manome no ho ny mandray? Mahazo tombondahiny tsinona izy amin’ny fiandrandrana ny fo sy ny vaton’ny mpifidy.
Misy tanjona kendrena ny fanolorana karazana fanampiana sy fanomezana: tsy asa soa, tsy falim-po… Misy tambiny andrasany ao? Izay ilay famitaham-bahoaka, dieny tsy mbola tonga eo amin’ny fitantanana sy fitondrana akory. Hahavita taona ny mpandray ve, ohatra, izay azony amin’izao fampielezan-kevitra izao, na heverina ho be toy inona aza? Nefa efa-taona ny tambiny izay fe-potoam-piasana izay voafidy eo.
Amin’izao hoe fotoan’ny fanovana izao, tsy efa tokony hiova ahay amin’izay ve izany? Mba ny vinam-piarahamonina sy ny fandaharanasan’ny mpirotsa-kofidina no andrandraina sy andrasan’ny mpifidy. Hanao ahoana, ohatra, ny ho endri-piainana amin’ny vinam-piarahamonina sy fandaharanasa aroso? Izay no hifanarahana amin’ny latsa-bato hatao: izay no tena hanao sy hahavita ny fanamby?
Fifanarahana sosialy eo amin’ny mpirotsa-kofidina sy ny olom-pirenena ny fifidianana amin’ny fampindramana fahefana amin’izay itokisan’ny vahoaka hitondra azy sy ny tanàna. Ny vinam-piarahamonina sy ny fandaharanasa toy inona no tena maharesy lahatra fa hampandroso ny tanàna sy hanatsara ny fiainan’ny mponina? Izany no takina amin’ireo mpirotsa-kofidina amin’izao fifidianana izao.
Izay tsy manana na tsy maharesy lahatra amin’izany no mameno ny banga amin’ny fanolorana karazana fanampiana sy fanomezana? Eny, fihetsiketsehana ivelany aza… Izay no itakiana mazava amin’izay hataon’ny mpirotsa-kofidina, raha voafidy eo izy. Mba hisy dikany sy vidiny ny safidin’ny tena, fa tsy noho izay karazana fanampiana sy fanomezana, sanatria. Iza amin’ireo mpirotsa-kofidina àry izay?